Yiziphi izifundo ze-Best Software Testing ku-India?
Ukuhlolwa kungenye yezinkathi ezibalulekile zenqubo yokuthuthukisa isofthiwe. Uma kungenzeka ukuthi isiteji sokuhlola asihambisani kahle, kunezikhundla eziphezulu ukuthi izinkinga ezibonakalayo nokungalingani kwi-software ngeke zitholwe. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba ucabange nge-best software yokuhlola izifundo ezifinyeleleka ukuzisebenzisa.
I-Courses Best Testing Courses:
I-1. Isitifiketi esiqinisekisiwe se-Software Test Professional Certification Course (CSTP):
I-2. Umqeqeshi we-Test Manager Certification Course (CTM):
I-3. Izitifiketi eziqinisekisiwe ze-Software Quality Certification Courses (CSQM):
I-4. Isitifiketi esiqinisekisiwe se-Software Test Automation Specialist Certification Course (CSTAS):
Funda ukuhlolwa kwesofthiwe
Nansi i-rundown yengxenye yezifundo ezinhle kakhulu zokuhlolwa kwesofthiwe ezingahlolwa yizazi.
Uhlelo oluqinisekisiwe lwe-software test test certification (CSTP)
Inkambo yokuqinisekisa isitifiketi sokuhlolwa kwemenenja yokuhlolwa (i-CTM)
Iziqinisekiso zokuqinisekisa izitifiketi zekhwalithi yesofthiwe ye-software (CSQM)
Isitifiketi esiqinisekisiwe se-software test test automation pro (CSTAS)
Lesi sitifiketi se-software yokuhlola software sihloselwe ukugxila ezintweni ezibalulekile kanye nezindlela ezinhle zokuhlolwa kwesofthiwe. Uhlelo lwenkambo lwaklanyelwe kangangokuthi kungenziwa ngaphandle kwezintandokazi ezifundwa yizingane ezizokwenza umsebenzi wazo esimweni sokuhlola isofthiwe. Lezi zifundo ziqinisekisa ukuthi ochwepheshe bazokwazi ukuhlela amacala angcono kakhulu okuvivinya ukuthi angasetshenziselwa ukuthola amandla ukuletha isofthiwe.
Okuhambisana nalokhu yizindawo zokuthi le nkambo yesitifiketi inikeza abazobhapathizwa:
Ukuklama nokwenza ngokufanele amacala wokuhlola emisebenzini ye-agile
I-Centering yokudala ukuhlungwa kokuhlola okungasetshenziswa kabusha emisebenzini ehlukahlukene
Ukuhlehlisa phansi kumhlangano womhlaba
Ukudala izinqubo ezinhle, izindlela, kanye nenqubo yokwenza amacala wokuhlola
Ukugxila ekulindeni izinto ezidingekayo zokuklama amacala wokuhlola
Ukubhekana nenqubo yokungapheleli okulandelayo
Ihambisana nemizila yokuhlukanisa nokuphathwa ngokusemthethweni kwezidingo zamakhasimende
Ukugxila ezintweni ezibalulekile zokuhlola okuzenzakalelayo
Leli klasi linikeza amandla ama-softfoots ekuhlolweni kwesofthiwe ukuthola ukuhlolwa kwesofthiwe okudingekayo ukulungiselela ukubasiza ukuba bahlangane nomsebenzi wabo emkhakheni ngamunye.
Isifundo sesitifiketi senziwa ngokubanzi nesibalo esiphezulu esinesibalo esincane sokubandakanyeka esikhaleni sokuhlola okwamanje hhayi ochwepheshe. Lesi sifundo sokuhlola isofthiwe sesitifiketi sibonakala njengenkambo encane ehlinzekwa ngu-IIST kwabachwepheshe bokuhlola. Isakhiwo senkambo senzelwe iphuzu lokuthi lihlala lizungeza amakhono nokufunda kochwepheshe.
Okuhambisana nalezi zinkampani zenkampani ezinikezwa yilo mkhakha:
Ukubhekana namafomu okuhlola ahlukene
Ukuphathwa kohlelo lokuhlola
Ukuhlola nokuthuthukisa uhlelo lokuhlola kanye nezinqubo
Ukugxila ekulawulweni kwezinengozi
Ukufanisa amasu kanye nesistimu yokuhlola okuzenzakalelayo
Ihambisana nezidingo zesitifiketi sekhwalithi yesofthiwe.
Ngokuyinhloko, ochwepheshe abanezinhlelo ezimbalwa zokubandakanyeka ekuhlolweni kwesofthiwe futhi abafisa ukwandisa ukuqonda kwabo nokuthuthukiswa kokuvuleka bayaqhubeka nalezi ziqinisekiso.
Okunye ngaphandle kokugxilisa ekuthuthukiseni ikhono kanye nolwazi lwabachwepheshe ngokuhlolwa kwe-software ukulungiselela, lesi sifundo sesitifiketi sikhombisa ukuthuthukisa amakhono okugcina ikhwalithi ye-software. Isitifiketi sinezela i-leeway ochwepheshe ngokubanika izici zokubhekana nekhwalithi yesofthiwe. Ochwepheshe abanezitifiketi ngokuyinhloko bavunyelwe yingxenye enkulu yezinhlangano ezivelele zokuthola yonke inhlanganisela yokuhlola isofthiwe nokugcina ikhwalithi yayo.
Okuhambisana nalezi zindawo zemininingwane yokuthi le nkathi yesitifiketi inikeza:
Ukuthuthukisa izindlela zokugcina ikhwalithi yesofthiweSetha umfanekiso oveziwe
Ukusebenzela ukuthuthukiswa kwemisebenzi yokuqinisekiswa kwekhwalithi yesofthiwe
Ukuklama izinqubo zokuhlola zokuqinisekisa ikhwalithi yesofthiwe
Ukubonisa ukwesekwa kokuthuthukiswa kwesofthiwe nokuhlanganiswa
Ukubhekana nokulungiselelwa kwesofthiwe
Ukuthuthukisa amasu okuthuthukiswa kwe-software ye-agile
Ukuhlela ukubuka nokuphenya kwe-software
Isifundo sesitifiketi ngokuyinhloko sikhombisa ikhwalithi yesofthiwe, kule migqa yenza umxube ohloniphekile uma kuhlanganiswe nesinye isitifiketi sokuhlolwa kwesofthiwe.
Lokhu kungenye yalezi zifundo zokuhlola isofthiwe ezisho iziphathimandla enkambu yokuhlola isofthiwe. Ochwepheshe abafuna ukukhulisa ukuqonda kwabo futhi bathathe izinqubo ezintsha zokuthuthukisa inqubo yokuhlola i-software khetha le nkambo yesitifiketi. Isitifiketi se-software yokuhlola i-software ichazwa ochwepheshe abaneminyaka engaba ngu-10 yokuzibandakanya ekuhlolweni kwesofthiwe. Iqukethe amazinga amaningi okuxoshwa nemibono yokuthuthukisa amafomu okuhlola i-software nokuhambisa imiphumela edingekayo edingekayo.
Lezi zihambisana nemininingwane yokuthi le nkathi yesitifiketi inikeza abazobhalwa:
Ihambisa izakhi ezicashile zokuhlola okuzenzakalelayo
Ukuklama amacala wokuhlolwa okwenziwa ngokusheleleka kokuzenzakalela kokuhlola
Ukuthuthukisa amasu nezindlela zokuhlola okuzenzakalelayo
Ukuklama nokuthuthukisa ubunjiniyela bokuhlola okuzenzakalelayo
Ukwakha amacala wokuhlola ukuqinisekisa ikhwalithi yesofthiwe
Ukufaka iziphakamiso zokuhlola zokuvikela isofthiwe ngokumelene nezingozi ezicatshangelwayo
Lesi sitifiketi singenye yamazinga aqinisekisiwe esitifiketi esimweni sokuhlolwa kwesofthiwe futhi iqinisekisa ulwazi oluningi mayelana nokuhlolwa kwesofthiwe.
ezinsukwini ezingu-2 kuphela
Izifundo ze-10 ezibulalayo ekuhlolweni kwesofthiwe zingakwenza ube ngumsizi